Abathengisi kunye neFFP3 yeMask kunye neFektri - Abavelisi beMask yeFFP3 yeMask
Nokuba yi-SARS okanye i-coronavirus pneumonia yinoveli, iimpahla zokhuselo lwezonyango zidlala indima ebalulekileyo ekusasazeni yonke le ntsholongwane, kwaye umgangatho weempahla zokuzikhusela ukhula ngokuthe ngcembe ngokuphuculwa kwetekhnoloji yemveliso. Eli nqaku liza kucacisa ngokulingeneyo ukhuselo lokonyango kwezi zinto zi-4 zilandelayo. Ukusebenza kwesithintelo Indlela yokuvavanya, indawo yokubonisa isampulu kunye nokuhlelwa komqobo wokukhusela impahla ebonakalayo kubonisiwe kwiTheyibhile 1. Jonga itafile b ...
FFP3 Ubuso bemaski
Uyisebenzisa njani ngokufanelekileyo impahla ekhuselayo? Ukusetyenziswa kwesinxibo esikhuselayo kuhambelana kakhulu nobomi bethu kunye nempilo, ngoko ke kubalulekile ukukhetha iimpahla zokhuselo ezihlangabezana neemfuno ezisemgangathweni. Okwangoku, ezonaimpawu zaziwayo ziDupont zaseMelika, Merika Lakeland, 3M, Sperian, njalo njalo. Emva kokufumana iimpahla zokukhusela, ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kubaluleke ngakumbi. Uyilo oluyimfuneko No.1 Ukubonakala kweengubo ezikhuselayo ziya kuba zome, zicoceke kwaye zingabikho ...
N95 igesi yeMask
Amanqaku: 1. Ilaphu le Meltblown lisebenzisa polypropylene njengeyona nto iphambili eluhlaza, kwaye idayamitha yodibaniso inokufikelela kwi-microns eyi-0.5-10. Ilaphu leMeltblown linokucoca umoya okuhle kwaye sisixhobo esihle semaski. 2. Yenziwe ngezinto ezininzi ezingenasiphene, ezingadibaniyo, izinto ezingashukumisiyo. 3. Guqula u-bandage strip kunye ne-foam cushion eyakhelwe-ngaphakathi ukuze ikwazi ukulungelelanisa imilo eyahlukeneyo yobuso ngokutywina okukhululekileyo. 4. Iimaski ezichithayo, ezingacocekanga kwaye zilungele ukusetyenziswa. Isicelo: 1. Isicelo: ukusetyenziswa kweqonga ...
FFP3 uthuli Mask
Iimpawu: 1. I-clip engabonakaliyo yeplastiki yempumlo, eyilwe ngokukhululekileyo ukuze ilingane neemilo zebhulorho yempumlo, ukhuselo lokhuseleko kunye nokulunga ngokupheleleyo; Ukuphefumla komoya okuphezulu simahla: Umphezulu ugutyungelwe ngemingxunya yomoya, ekhululekile kwaye ingaphefumla. Ukuphefumla ngobumnene kwakhona kunomlomo omkhulu wokuhlanjululwa komoya omtsha ukuze wanelise; 3. I-webping ethambileyo ne-elastic iqinisekisa ukuqina kunye nokuqina ngelixa uthathela ingqalelo ukonwaba kokunxiba; 4. Ilaphu le Meltblown lisebenzisa polypropylene njenge ...
Amanqaku: 1. Ilaphu le Meltblown lisebenzisa polypropylene njengeyona nto iphambili eluhlaza, kwaye idayamitha yodibaniso inokufikelela kwi-microns eyi-0.5-10. Ilaphu leMeltblown linokucoca umoya okuhle kwaye sisixhobo esihle semaski. 2. Yenziwe ngezinto ezininzi ezingenasiphene, ezingadibaniyo, izinto ezingashukumisiyo. 3. Guqula u-bandage strip kunye ne-foam cushion eyakhelwe-ngaphakathi ukuze ikwazi ukulungelelanisa imilo eyahlukeneyo yobuso ngokutywina okukhululekileyo. 4. Iimaski ezichithayo, ezingacocekanga kwaye zilungele ukusetyenziswa. Isicelo: 1. Isicelo: ukusetyenziswa kolwakhiwo, m ...
Iimpawu: 1. Zenziwe ngezinto ezisemgangathweni, zikhuselekile, zithambile kwaye zikhululekile. 2. Iipesenti ezingama-95% zokucoceka, ukubonelela ngokhuseleko lwe-bacteria kunye nokuthintela uthuli. 3. Ukukhusela kwiinkqubo ezinomoya kunye nongcoliseko. 4. Imitya ye-elastic kunye neekliphu ezihlengahlengisiweyo zekhephu zobuso ezahlukeneyo nobukhulu. Isicelo: 1. Isicelo: ukusetyenziswa kolwakhiwo, ukumbiwa kwemigodi, ilaphu, amayeza okugaya. 2. Izicelo: Ubomi bemihla ngemihla, indibano yokusebenzela, ii-SPA, izibhedlele, iikliniki, isikolo, iindawo zomsebenzi, njl. 3. Ukhuseleko ngoku ...
Iimpawu: 1. Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nemisebenzi yangaphandle. 2. Ukuhanjiswa kwentsholongwane kaGawulayo 3. Ukuhanjiswa kwe-anti Droplet 4. Ukungcoliswa kwamachiza 5. Isicelo seAnti-Dust: 1. Isicelo: ukusetyenziswa kolwakhiwo, ukumbiwa kwemigodi, ilaphu, amayeza okugaya. 2. Izicelo: Ubomi bemihla ngemihla, iworkshop yasemsebenzini, ii-SPA, izibhedlele, iikliniki, isikolo, indawo yokusebenza, njl. Kwiprothin ...